Beesha Hayaag Oo Ku Gacan Saydhay Go’aan Ka Soo Baxay Kooxda Nabad-diidka Ah Ee Cali Galaydh | Somaliland.Org
Beesha Hayaag Oo Ku Gacan Saydhay Go’aan Ka Soo Baxay Kooxda Nabad-diidka Ah Ee Cali Galaydh
April 30, 2012	Buuhoodle (Somaliland.Org) Burbur xoog leh iyo khilaaf aad u ba’an ayaa la sheegay in uu soo dhex galay kooxda nabad-diidka ah ee Cali Galaydh. Ka dib markii xubno ka tirsan qurbe jooga la majaro habaabiyey ee taageera fidmo wadaha Cali Galaydh ay todobaadkii hore ku baahiyeen mareegaha internetka ee kooxdaasi adeegsato go’aan ay ku sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Boqor Cabdillaahi Daba-gooye oo ka mid ah madaxdhaqameedka Beesha Hayaag, oo ka tirsan beelaha deegaanka Buuhoodle.
Arrintaasina sida ay Wargeyska Dawan u sheegeen ilo wareedyo ku sugan Magaalada Buuhoodle waxaa ka dhashay khilaaf xoog leh iyo ismaan dhaaf ka dhex oogmay kooxda nabad-diidka ah iyo waxgaradka beesha Hayaag oo ku gacan saydhay go’aanka kooxda qurbe-jooga ahi ku sheegtay in ay xilkii madax dhaqameednimo kaga qaadeen Boqorka beeshaas Cabdillaahi Daba-gooye , oo ay ku eedeeyeen in uu ka hor yimid wax ay ku tilmaameen go’aamadii ka soo baxay shirkii Taleex ee lagu dhisay maamul beenaadka Khaatumo seeg, isla markaana uu ka qaybgalay shirkii lagu ansixinayey dastuurka uu samaystay maamul goboleedka Puntland.
Warku waxa uu intaas raaciyey in kulan amuurtaas la xidhiidha oo ay ka qaybgaleen Cuqaasha, waxgaradka, odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada beesha Hayaag shalay lagu qabtay Magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka Buuhoodle, kaas oo beeshu jawaab cad kaga bixisay hadalka ka soo yeedhay kooxda majaro habawsan ee Cali Galaydh.
Dadkii kulankaas ka qaybgalay waxa la sheegay in ay dhamaantoodba si wada jir ah u cambaareeyeen go’aanka lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday boqorkooda, kaas oo ay ku tilmaameen in uu ahaa shirqool loogu talo galay in beeshaas dhexdeeda colaad iyo fidmo laga abuuro, sidaas aawadeedna wax xil ah oo boqorkooda laga qaaday aanay jirin. Isla markaana go’aan ka kooxdaasi aanu ahayn mid soconaya oo beeshaasi aqoonsantahay.
Jaamac Ismaaciil Khayre (Waran-hayaag), ayaa sheegay in kooxda khaatumo-seeg ay bilaabeen inay isku dhuftaan beelaha Dhul-bahante isla markaana ay wax u dhimmaan haybadda isimadda beeluhu soo doorteen, waxaanu tilmaamay inaanay waxba ka jirin xilka qaadista Boqor Cabdilaahi Dabo-gale.
“Waxaan leeyahay kooxda Khaatumo wax kalsooni ah kama qaadi kartaan Boqorkayaga, markii horena kalsooni ma haysaan go’aankiinuna waa mid aanay waxba ka jirin oo aan idiin fulayn beeshayadana iskuma dhufan kartaan.”ayuu yidhi Jaamac Waran-hayaag.
Geesta kale, Caaqil Abokor Ismaaciil Cali (Cadmeed), waxaanu sheegay inuu la yaabay dhawaaqa ka soo yeedhay kooxda Khaatumo-seeg, waxaanu yidhi “Waxaan leeyahay saaxiibeyaal Boqorka reer baa doortay ee koox yar oo afka isa saartay kama qaadi karto. Waxaan kooxda khaatumo-seeg leeyahay ka daaya lugooyadda bulshadda deegaanka ku haysaan iyo burburka aad ku soo dhex tuuraysaan.”
Dhinaca kale, Fanaanadda weyn ee Saado Cali Warsame oo si waaliya u taabacsan kooxaha nabad diidka ayaa iyaduna maalmihii la soo dhaafay si weyn u naqdiyay kooxda khaatumo-seeg iyo go’aanka la sheegay in xilkii lagaga qaaday Boqor Cabdilaahi Dabo-galle.
“Beryahan dambe waxa socda saxal, waxa laga tagay haybaddii dhaqanku lahaan jiray. Waxa kale oo meesha ka maqan xishoodkii oo lama xishoonayo. Waxaan arkay Boqor Cabdilaahi oo la leeyahay Golaha Dhaqanka ee Khaatumo ayaa xilkii laga qaaday. Horta dadka waxaas samaynayaa ma xishoonayaan,”ayay ku tiraabtay Saado Cali.
Saado waxay kooxda khaatumo-seeg u soo jeedisay inay gefka ka daayaan isimadda iyo madaxda dhaqanka.
Waxa kale oo ay si weyn u naqdiday mareegaha Internet-ka kooxda Khaatumo oo ay ku sifaysay kuwo aan waxba ka garaynayn xuquuqda qoraalka iyo wixii mudan in la qoro. Waxaanay u soo jeedisay inay bartaan xirfadda iyo xeerarka mihnadda saxaafadda.
Previous PostMaareeyaha Dekeda Berbera Oo Ka Waramay Waxyaabihii u Qabsoomay Muddadii uu JoogayNext PostCiyaarta weyn ee caawa labada Manchester	Blog